बुधबार भगवान श्रीकृष्णको विशेष दिन, यसरी गर्नुहोस पूजा ,मिल्छ धेरै फल ! | सुदुरपश्चिम खबर
बुधबार भगवान श्रीकृष्णको विशेष दिन, यसरी गर्नुहोस पूजा ,मिल्छ धेरै फल !
यसलाई बसाहाथान भनेर चिनिन्छ । जुन गुफाको मुखमा बसाहलाई राखी महादेव आकाशमा निस्के भनिएको छ त्यो वारपार छिचोलिएको गुफालाई बसाहा थान भनिन्छ ।
यो गुफाको मुखमा आज पनि एउटा अजङ्गको चट्टान छ र यसैलाई बसाहा भनी पूज्ने गरिन्छ । बसाहाथानको गुफा कैलाशपर्वत भनिने थुम्कोको फेदतिरबाट तेर्सो छेडिएर जाँदै झण्डै १५० फिटमा पुगेपछि अङ्ग्रेजी अक्षरको एल (ी) जस्तो ९० डिग्रीको कोणमा ठाढै उठेर छिचोल्दै आकाशमा निस्किएको छ ।
यो गुफाको मुखबाट एकै चोटी ८र१० जना सजिलै पस्न सकिन्छ । यसको गर्भ झण्डै ४५ फिट चौडा छ । आकाशतिरको मुख धेरै चौडा छ । यस्को कुना काप्चाबाट पानी रसाएका छन् । एक ठाउँमा भित्तामा गाईका थुनहरू जस्तै चुनढुङ्गाका पग्लँदै गरेका जस्ता चुच्चा आकृतिहरू देखिन्छन् । त्यसबाट चुनमिश्रित चौलेनी रंगको पानी टप्कने गर्दछ ।
बैदेशिक रोजगारीको लागि कोरोना महामारीमै उडे ६२ हजार कामदार !
डोटी जिल्लामा आठ सय ७७ जनाले कोरोना खोप लगाए !